Atsaharo ny fampandrenesana sy ny foibe fanaraha-maso | Vaovao IPhone
Ahoana ny fomba tsy ahafahanao miditra amin'ny foibe fampandrenesana sy foibe fanaraha-maso eo amin'ny efijery hidin-trano
Nacho | | iOS 7, Fampianarana sy torolàlana
Ny iray amin'ireo lahasa vaovao izay entin'ny iOS 7 dia ny fidirana amin'ny foibe fampandrenesana sy ny foibe fanaraha-maso vaovao avy amin'ny efijery fanidy. Ilaina indrindra izany hanatanterahana hetsika sasany sy hijerena fampahalalana nefa tsy mila hamoha ny iPhone, na izany aza, mety tsy hampandeha anao ny fidiranao hitahiry ny tsiambaratelo ary hisorohana ireo lesoka azo antoka azo antoka toy ireo hitantsika tao amin'ny iOS 7.0.
Ny dingana hanarahana dia tena tsotra ary mitokana ho an'ny tsirairay amin'ireo takelaka roa, izany hoe afaka isika ajanony ny fidirana mankany amin'ny foibe fampandrenesana avy amin'ny efijery fanidiana fa mitazona ny fidirana amin'ny foibe fanaraha-maso. Toy izany koa no mitranga amin'ny fomba hafa.
1 Atsaharo ny foibe fampandrenesana
2 Esory ny foibe fanaraha-maso
Atsaharo ny foibe fampandrenesana
Raha izany no tiantsika esory ny fidirana amin'ny foibe fampandrenesana avy amin'ny efijery hidin-trano isika tsy maintsy manao ireto dingana manaraka ireto:
Menu fanovana> Ivotoerana fampandrenesana> Nofoaninay ny safidy "Fampandrenesana mijery" sy ny "Mijery anio" izay hita ao amin'ny fizarana "Fidio miaraka amin'ny efijery mihidy".
Raha mankany amin'ny efijery hidin-trano isika izao dia ho hitantsika fa tsy azo atao intsony ny manaisotra ny ivon'ny fampandrenesana amin'ny alàlan'ny fanaovana fihetsika mahazatra mihetsiketsika midina avy eo an-tampon'ny efijery.
Esory ny foibe fanaraha-maso
Amin'ity tranga ity, ny dingana tokony harahina ajanony ny fidirana amin'ny foibe fanaraha-maso avy amin'ny efijery hidin-trano dia toy izao manaraka izao:
Menu fanovana> Ivotoerana fanaraha-maso> Nofoaninay ny safidy «Fidirana amin'ny efijery mihidy».
Araka ny hitanao, amin'ny dingana vitsivitsy vitsivitsy azonao atao amboary ny efijery hidin-trano araka izay itiavanao azy ary mamela na mandà ny fidirana amin'ny foibe fampandrenesana sy ny foibe fanaraha-maso.
Fanazavana fanampiny - Torohevitra sy tetika vaovao ao amin'ny iOS 7 izay hahafahanao manararaotra tsara izany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » Ahoana ny fomba tsy ahafahanao miditra amin'ny foibe fampandrenesana sy foibe fanaraha-maso eo amin'ny efijery hidin-trano
Ity iOS miloko eo anelanelan'ny mampalahelo sy ny pelaka ity dia tsy misy toerana hitondrana azy ...
Etsy ambony dia hitako fa amin'ny hafatra dia tsy mamela ny fikosehana intsony ny hamafa ... Fahazaran-dratsy efa fanaon'izy ireo ve ny manala ireo fiasa mahasoa sy manampy ireo tsy misy ilana azy?
Na izany na tsy izany.
Pep dia hoy izy:
Fafafa ny mifanohitra amin'izay no izy, vorontsiloza. Raha ny momba ny pelaka dia amiko dia olona manenina ianao ...
Mamaly an'i Pep
Kianja David Arias dia hoy izy:
Valiny tamin'i David Arias Cuadrado
Agus dia hoy izy:
Ny fidirana amin'ny foibe fampandrenesana sy fanaraha-maso dia tsy mandeha amin'ny alàlan'ny efijery mihidy ary tsy mamela ahy hamelona azy io indray. Misy fomba iray hamerenana ireo safidy ireo?
Mamaly an'i Agus
Ny fanontaniako dia hoe: maty daholo ny zava-drehetra, afa-tsy eo amin'ny efijery tsy misy fanakanana, izany hoe, manoratra aho izao, ary raha nofafako ilay efijery dia hivoaka ireo fampandrenesana rehetra ao anatin'izany ny WhatsApp. Manomboka amin'ny iray andro ka hatramin'ny manaraka dia tsy niverina tamiko ireo hafatra WhatsApp, fa ny an'ny tsirairay ihany, mahazo vondrona aho ary raha mandefa feo na sary ho ahy koa izy ireo. Tsy mahazo ireo voasoratra fotsiny aho ary tsy azoko ny antony, tsy mbola nanavao na nanohina na inona na inona aho ...
Misy mahatsapa izany ve?
Te-hanafoana tanteraka an'io foibe fampandrenesana io aho, tsy te hahita azy intsony, inona no tokony hataoko?
Amin'ny halaliny: sary sy horonan-tsary misy amin'ny fakantsary iPhone 5s
Ahoana ny fomba hananganana ny Apple TV amin'ny fitaovana iOS 7